hunhu kugura zvakakosha
Kuru Chengetedzo Maitiro Ekubiridzira Akakosha
Maitiro Ekubiridzira Akakosha
Iyi blog post ndeye sumo yePenetration Testing uye Ethical Kubiridzira. Tichafukidza zvekutanga zvePen kuyedza uye kutsanangura kuti nei kuongororwa kwekupinda kwakakosha kumasangano.
Tichavhara zvakare nhanho dzekuyedzwa kwekupinda uye kutsanangura zvinoitika padanho rega rega.
Chekupedzisira, ticha tarisa mamwe maturusi anowanzo shandiswa muKupinda Muedzo.
Kupinda Kupinda - Ethical Kubiridzira Basics
Kana isu tichifunga zvekubiridzira, isu tinowanzozvibatanidza ne zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko. Kana mubiridzi akarwisa system, vanozviita vasina ruzivo uye mvumo yemuridzi wehurongwa. Taura zvakapusa, zvakafanana nekupinda mumba memumwe munhu usina mvumo izere yemuridzi uye chibvumirano chekutanga.
Kubira kwetsika, kune rumwe rutivi, kuchiri kubiridzira. Inosanganisira kuunganidza ruzivo nezve system, kutsvaga maburi uye kuwana mukana. Nekudaro, mukubira kwetsika, muyedzo wepeni ane_ mvumo izere nemvumo _ yemuridzi wehurongwa. Naizvozvo, chiitiko chinova chetsika, i.e. chaitwa nevavariro yakanaka.
Vatengi vanoshandisa vane hutsika hunyanzvi kuvandudza chengetedzo.
Chii chinonzi Kupinda Kupinda?
Kupinda kupinda mukati kunosanganisira kutevedzera kurwisa chaiko kuti utarise njodzi inosanganisirwa nekukanganisa kwekuchengetedza.
Munguva yekuyedzwa kwepeni, vanoedza vanoshandisa maturusi akasiyana siyana nemaitiro ekuti vawone kusasimba. Vanozoedza kushandisa kusagadzikana kuti vaone izvo vangarwisane nazvo mushure mekubudirira kubiridzira.
Nei Kupinda Kupima Kunokosha?
Kwemakore, kwave paine kuwedzera kuwanda kwehuwandu hwekutyisidzira kwecyber uye zviitiko zvematsotsi zvinosanganisira Information Technology. Mabhizinesi anofanirwa kuita ongororo yekutadza kusangana uye kuyedzwa kwekupinda kuti aone kushaya simba mumasisitimu avo. Ivo vanogona ipapo kushandisa anoshanda matanho ekudzivirira masisitimu avo kune yakaipa malayer.
Ndiani Anoita Peni Bvunzo?
Ethical hackers ndivo vanhu vanowanzoita Kupinda Kupinda Kuyedza.
Kuti ubate mbavha, unofanirwa kufunga senge.
Izvi zvakafananawo mukubira kwetsika.
Kuti uwane nekugadzirisa maburi ekuchengetedza mukombuta system, iwe unofanirwa kufunga senge yakaipa hacker. Iwe waizoshandisa iwo iwo maitiro, maturusi, uye maitiro avanogona kushandisa.
Anobiridzira ane hunhu anoshandisa maturusi nemaitiro akafanana nematsotsi angangoshandisa. Asi vanozviita nerutsigiro ruzere rwemutengi uye tendero, kuitira kubatsira kuchengetedza network kana system.
Kupinda muKwayedza vs Vulnerability Kuongorora
Vulnerability kuongororwa kunoongorora zvinhu zvakafumurwa (samambure, sevha, kunyorera) kwekukuvara. Iko kuderera kwekushushikana scan ndeyekuti inowanzo rondedzera manyepo enhema. Manyepo akanaka angave mucherechedzo wekuti huripo huripo hahuite zvizere.
Kupinda mukati ekupinda kunoenda nhanho imwe mberi uye kunotarisa kusagadzikana uye kuchaedza nekuvashandisa.
Mhando dzeKupinda Muedzo
Nhema Bhokisi Kupinda Kuyedzwa
Muye nhema-bhokisi kupinda mukati kuyedza, muyedzo haana ruzivo rwemberi nezve chinangwa. Izvi zvinonyatsofananidza kurwisa chaiko-kwenyika uye kunoderedza manyepo enhema.
Rudzi urwu rwekuyedza runoda kutsvagisa kwakakura uye kuunganidzwa kweruzivo pane yakanangwa system / network. Iyo inowanzo shandisa yakawanda nguva, kushingirira, uye mutengo kuita dema bhokisi kupinza bvunzo.
Grey-Bhokisi Kupinda Kuyedzwa
Mune grey-bhokisi kupinda mukati kuyedzwa, iye muyedzo ane mashoma kana mashoma ruzivo nezve iyo tarisiro yezvivakwa. Ivo vane rumwe ruzivo rwechengetedzo nzira dziri munzvimbo.
Izvi zvinofananidza kurwisa newemukati kana wekunze hacker uyo ane vamwe ruzivo kana rombo rakanaka pane yakanangwa system.
Chena-Bhokisi Kupinda Kuyedza
Mune chena-bhokisi kupinda mukati kuyedzwa, ivo vanoedza vane ruzivo rwakadzama-rwakadzama nezve iyo tarisiro yezvivakwa. Ivo vanoziva nezve nzira dzekuchengetedza dziripo. Izvi zvinoita kuti bvunzo ikurumidze, nyore, uye isingadhuri.
Izvi zvinofananidza kurwisa kunogona kuitika neyemukati ane ruzivo rwakakwana uye neropafadzo pane chakanangwa system.
Mune urwu rudzi rweyedzo, munhu wese anoziva kana kuyedzwa kuchatanga. Iyo IT inoshandira timu yemambure, uye timu yeku manejimendi vese vane ruzivo rwemberi rwepeni yekuyedza chiitiko.
Mune mhando iyi yekuyedza, vashandi veIT uye zvikwata zvekutsigira havana ruzivo rwemberi rwepeni yekuyedza chiitiko.
Chete manejimendi manejimendi ndiye anoziva nezve bvunzo chirongwa. Kuyedza kwakadai kunobatsira kuona kupindurwa kweIT uye nevashandi vekutsigira kana paitika kurwisa kwekuchengetedza.
Automated Kupinda Kunoedzwa
Nekuti kuyedzwa kwekupinda kunosanganisira akawanda mabasa uye iyo yekurwisa nzvimbo nzvimbo zvakare yakaoma dzimwe nguva, dzimwe nguva zvinofanirwa kushandisa maturusi ekugadzirisa akawanda emabasa.
Chombo ichi chinopesana nezvivakwa nguva nenguva uye vozogovana mishumo nemapoka ane chekuita nekugadzirisa matambudziko acho.
Chinhu chakashata chekushandisa otomatiki maturusi ndechekuti ivo vanozongotarisa zvakasarudzika kushushikana nekudaro vachipa manyepo enhema.
Izvo zvakare haigone kuongorora mapurani uye kusanganisa system kubva pakuona kwekuchengetedza. Nekudaro, iyo inokodzera kuongorora akawanda akanangwa kakawanda uye kuti ubatsire kuongorora kwebhuku.
Manual Kupinda Kwayedza
Mukuyedza kwemanyorerwo, muyedzo anoshandisa hunyanzvi hwake uye nehunyanzvi kuti apinde mukati mechinangwa. Iye muedzo anogona zvakare kuita ongororo yemapurani uye mamwe maitiro enzira mukutaurirana nezvikwata zvakasiyana. Zvekuyera kuchengetedzwa kwekuyedzwa, zvakanakisa kushandisa musanganiswa we otomatiki uye echinyorwa kuyedzwa.
Nhanho dzeKupinda Kuedza
Peni yekuyedza inotanga neiyo pre-yekubatanidzwa chikamu. Izvi zvinosanganisira kutaura nemutengi nezvezvinangwa zvavo zvepeni bvunzo uye kuronga mepu yechiyero.
Mutengi uye wepeni muedzo semibvunzo uye kuseta zvinotarisirwa.
Vamwe vatengi vanoisa miganhu pachiyero chezviitiko.
Semuenzaniso, mutengi anopa mvumo kune muedzo kuti awane kushomeka kwedhatabhesi, asi kwete kutora data rakaomarara.
Chikamu chekutanga-chekuita chinofukidzawo zvimwe, senge hwindo rekuyedza, ruzivo rwekuonana, uye nemitemo yekubhadhara.
Muchikamu chekuunganidza-ruzivo, vapeni vanoongorora vanotsvaga ruzivo rwuripo paruzhinji pamusoro pemutengi uye vanoona nzira dzinogona kubatika kune masisitimu etsamba
Iwo ma testers anotanga kushandisa maturusi akadai sema scan scanner kuti uwane pfungwa yekuti ndeapi masisitimu ari kunze uko kunetiweki yemukati pamwe neiyo software iri kumhanya.
Muchikamu chekutyisidzira-modelling, ivo vanoedza vanoshandisa ruzivo rwakaunganidzwa muchikamu chakapfuura kuti vaone kukosha kwekutsvaga kwega kwega uye kukanganisa kune mutengi kana iko kutsvaga kuchibvumidza anorwisa kuti apinde muhurongwa.
Kuongorora uku kunotendera pentester kugadzira chirongwa chekuita uye nzira dzekurwisa.
VaPen Testers vasati vatanga kurwisa system, vanoita ongororo yekunetseka. Pano, vaPen Testers vanoedza kutsvaga kushaya simba muhurongwa hunogona kutorwa mukana muchikamu chinotevera.
Muchikamu chekushandisa, VaPen Testers vanotanga kushandisa kwavo vachipesana neiyo tarisiro system. Ivo vanoshandisa zvakawanikwa kare kusagadzikana mukuyedza kuwana masisitimu evatengi. Vachaedza maturusi akasiyana siyana uye nzira kuti vapinde muchirongwa.
Mukupedza kubiridzira, vanoedza vanoongorora kukura kwekukuvara kunogona kuitwa kuburikidza nechimwe chiitiko. Mune mamwe mazwi, vanoongorora njodzi.
Semuenzaniso, panguva yekuyedzwa kwepeni, vaedze vakanganisa maitiro evatengi. Iko kupindira kunoreva here chero chinhu kune mutengi?
Kana iwe wakapaza kuita system isingaratidze chero yakakosha ruzivo rwekufarira kune anorwisa, saka saka chii? Iyo njodzi yekushomeka yakadzikira zvakanyanya kupfuura kana iwe uchikwanisa kushandisa hurongwa hwekusimudzira mutengi.
Chikamu chekupedzisira chekuyedzwa kwekupinda chiri kutaura. Muchikamu chino, vaPen Testers vanopa zvavakawana kumutengi nenzira ine musoro. Chirevo chinozivisa mutengi izvo zvavari kuita nemazvo uye kwavanoda kunatsiridza kuchengetedzeka kwavo.
Chirevo chinogona kusanganisira ruzivo rweumwe neumwe wekushandisa uye matanho ekuzvigadzirisa.
Zvakajairika Zvishandiso Zvinoshandiswa Kupinda Kupinda Kuyedza
Maviri ezvishandiso zvakajairika zvinoshandiswa panguva yekuyedzwa kwepeni ari Nmap uye Metasploit .
Zvese zvishandiso zvinogona kupa hupfumi hwemashoko pane yakatarwa sisitimu.
Kali Linux kubva kunogumbura chengetedzo inosanganisira zvimwe zvakawanda zvishandiso inoshandiswa mumatanho akasiyana ekuyedza.
ndinofanira here kuwana 5g foni
ipad nzvimbo grey vs sirivheri
ios theme yenyowani launcher
Google Pixel 5 zvibvumirano, mitengo yekutengeserana uye kuwanikwa kuVerizon, T-Mobile, AT & T, uye Best Buy
Akanakisa maviri asina waya majaja 2021: kuchaja foni yako uye tarisa panguva imwe chete
Akanakisa Samsung Galaxy S21 kesi
Motorola inozivisa Moto X Yakachena Edition Marshmallow yekuvandudza yeVerizon, Sprint, uye US Cellular
Iwo mana akanakisa Android vhidhiyo ekugadzirisa mapurogiramu, kune chero bhajeti uye hunyanzvi danho
Apple kuvhura Beats Powerbeats Pro pre-yekuraira muna Chivabvu 3, zuva rekuburitsa rakagadzirirwa May 10
iPhone 13 Mini vs iPhone 12 Mini: zvatinoziva kusvika zvino
Maitiro ekubvisa zvachose Anwendung kubva kune ako maapplication rondedzero muGoogle Play Chitoro
Chakavanzika gadheni: maitiro ekuvanza maapplication pane yako iPhone